Okwu sitere na Aimé Césaire - Afrikhepri Fondation
Tọsde, Machị 4, 2021
Okwu nke Aimé Césaire kwuru
La Négritude, nnupụisi dị mkpa megide mmetụta nke ịdị elu nke ndị Europe
Negritude na-arụpụta uche na mkpasu iwe nke uche.
Ọ na-ama jijiji, na-awụlikwa elu.
Ọ bụ ịjụ, m pụtara ịjụ mmegbu.
Ọ bụ ọgụ, ya bụ, ịlụ ọgụ megide inequality.
Ọ bụkwa nnupụisi. Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-agwa m, nupụ isi megide gịnị? Anaghị m echezọ na m nọ ebe a na nnọkọ ọdịbendị, na ọ bụ ebe a, na Miami, na m họrọ ikwu ya. Ekwenyere m na mmadụ nwere ike ịsị, n'ozuzu ya, na akụkọ ihe mere eme Negritude bụ ụdị nnupụisi mbụ megide usoro ụwa nke ọdịbendị dịka e mere ya na narị afọ gara aga na nke ejiri ụfọdụ ajọ mbunobi, echiche ndị na-eduga n'ọchịchị siri ike. N'aka ozo, Negritude bu nnupu isi megide ihe m gha akpo mbelata nke Europe.
Echere m na usoro echiche a ma ọ bụ kama ọ bụ ebumnuche ebumpụta ụwa nke ọpụrụiche na ama ama iji mebie ugwu ya ọbụna iji mepụta oghere gburugburu ya site na iji iwe na-eweghachi echiche nke ụwa niile, ọ hụrụ n'anya Léopold Sédar Senghor , na ya akụkụ, na ndị ọzọ okwu na-eche eluigwe na ala na-amalite site na ya naanị postulates na site na ya edemede. Anyị ahụla ma anyị ahụla nke ọma nsonaazụ nke a gụnyere: igbupụ mmadụ isi onwe ya, igbupụ mmadụ na mgbọrọgwụ ya, igbupụ mmadụ n’eluigwe na ala, igbupụ mmadụ na mmadụ , ma wezuga ya, n'ikpeazụ, na mpako igbu onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ụdị amamihe na nkà mmụta sayensị nke ime ihe ike.
Ma, ị ga-agwa m, nnupụisi nke na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nnupụisi abụghị naanị ihe mgbochi akụkọ ihe mere eme. Ọ bụrụ na Negritude abụghị njedebe nwụrụ anwụ, ọ bụ n'ihi na ọ dugara ebe ọzọ. Ebee ka ọ na-eduga anyị? O duru anyi gaa na onwe anyi. Na, n'eziokwu, ọ bụ, mgbe ogologo nkụda mmụọ gasịrị, ọ bụ njide nke onwe anyị n'oge gara aga na, site na uri, site n'echiche, site na akwụkwọ ọgụgụ, site na ọrụ nka. , ọkụ na-agbanwe agbanwe nke ọdịnihu anyị.
Mgbagwoju anya nke echiche, omenala ala ọma jijiji, ihe omimi nile nke iche iche ga-ekwe omume ebe a. Ma isi ihe bụ na ọ malitere a ghara ịgbanwe anyị ụkpụrụ azụmahịa site anyị onwe anyị, anyịnwa ịhụkwu nke anyị gara aga site anyị onwe anyị, ndị re-dịrị anyị onwe anyị na a akụkọ, na a ọdịdị ala na a omenala, ihe niile ọ na-abụghị n'ihi na otu kenchara traditionalism, kama site na a reactivation nke gara aga n'ihi na ya onwe transcendence.
Literature, ànyị ga-ekwu?
Echiche ọgụgụ isi?
Obi abụọ adịghị ya. Mana akwukwo ma obu ntughari uche n'emeghi ihe o bula. Ndien ke akpanikọ, mgbe m na-eche nke African onwe nke 1960 afọ, mgbe m na-eche banyere nke a anya nke okwukwe na olileanya nke welitere n'oge, kọntinent, ọ bụ eziokwu, m na-eche nke Negritude n'ihi na m na-eche Negritude egwuri ya ọrụ, na a ọrụ nwere ike ịbụ oké mkpa, ebe ọ bụ a ọrụ na ibe ya bụrụ ma ọ bụ mkpali.
Nke a reconquest of Africa onwe ya adịghị mfe, na ihe omumu nke ọhụrụ a nnwere onwe nke gụnyere ọtụtụ wepụtara na mgbe ụfọdụ ndakpọ olileanya ga-achọ a culpable amaghi nke akụkọ ihe mere eme nke mmadụ , akụkọ ihe mere eme nke ntoputa nke mba dị iche iche Europe onwe ya, na nke iri na itoolu na narị afọ na Europe na n'ebe ndị ọzọ, ọ bụghị ịghọta na Africa, kwa, e kee ụtụ n'oge nke oké mgbanwe.
Ma nke ahụ abụghị isi. Ihe bụ isi bụ na Africa agbanweela akwụkwọ na colonialism ma gbanwee ya enyerela aka iweta oge ọhụrụ maka mmadụ niile.
Ekwu okwu nke Aimé Césaire 26 February 1987 (USA)
Aimé Césaire: "enweghị mmechu ihu" _1ere_ed - imechi na ịgbanwee na 9782330039288
7 ọhụrụ site na .9,00 XNUMX
5 ejiri site na € 5,01
Zụta € 9,00
Emelitere ikpeazụ na Machị 4, 2021 8:18 PM
Minerva Mundi - Hamis Trismegiste (PDF)